umshini Screen ukuphrinta usebenza - China Changzhou Plet Ukuphrinta
Isikrini iphrinta ukusebenza isingeniso isimiso -
1. Plane flat screen umshini wokunyathelisa imisebenzi.
1 Plane umshini wokunyathelisa kwesikrini uhlelo umjikelezo ukusebenza. Endabeni a flat halftone uhlobo kwesikrini monochromatic semi-automatic umshini wokunyathelisa kwesikrini, omunye umsebenzi walo imijikelezo kuyinto: yokudla → ukuma → falling off → phansi ipuleti inki, emuva ipuleti inki → nokususa umvimbo inki → ephakama uyinki plate → uphonsa emuva inki ipuleti → lift okufushane → inki ukubuya unhlangothi → ukukhululwa ukuma → ukuthola.
Emjikelezweni ukusebenza okuqhubekayo, inqobo nje uma umsebenzi kungenziwa igcwaliseke, isikhathi elalihlala isenzo ngasinye kufanele kube njengoba short ngangokunokwenzeka, ukuze unciphise ngamunye umjikelezo ukusebenza futhi ukwandisa umsebenzi kahle.
3 imprinting umugqa. Phakathi nenqubo ukuphrinta, plate inki nesitsha isikrini kuthiwa sicindezelwe ukwakha umugqa ukuxhumana phakathi ipuleti kwesikrini futhi substrate, okuthiwa i umugqa isinyathelo. Lo mugqa at emaphethelweni squeegee nemigqa ezingenakubalwa yakha ukuphrinta surface. Kunzima ukufinyelela awunqunte enhle ngoba unhlangothi ukuphrinta kuyinqubo ashukumisayo.
3 kwesikrini umshini wokunyathelisa usebenza. Ukuthatha evame ukusetshenziswa isandla emise isikrini indiza esikrinini umshini wokunyathelisa njengesibonelo, isimiso sokusebenza umshini wokunyathelisa kwesikrini kungenziwa bachazwa futhi ngalendlela: amandla idluliselwa nge indlela yokudlulisela, ukuze squeegee inki ngazo likayinki isikrini ukuphrinta ipuleti ngesikhathi le nhlangano ukuze enze kwesikrini i plate kanye substrate ifomu ulayini imprinting. Njengoba skrini kwaphinde kwaba nokungezwani kwezigodi N1 N2, a F2 amandla ekhiqizwa phezu squeegee, kanye nokuqinisela kubangela ipuleti isikrini ingamthinti substrate ngaphandle umugqa imprinting. Uyinki kuyinto Ngaphansi umphumela squeegee sika ecindezela amandla F1, le squeegee is oputshukile kusukela awunqunte ukuthuthela substrate ngokusebenzisa anezikhala.
Phakathi nenqubo ukuphrinta, isikrini ukuphrinta plate kanye squeegee sishukumiseleka isihlobo komunye nomunye, futhi ecindezela amandla F1 kanye F2 nokuqinisela nazo wathutha synchronously. Ngaphansi isenzo nokuqinisela, isikrini wabuya ukuxhumana nge substrate ngesikhathi ukugwema ukuthintana. Sihleli ezingcolile. Okungukuthi, phakathi unhlangothi ukuphrinta, isikrini ngokuqhubekayo zikhubazekile futhi asimama.
Ngemva squeegee uqeda wokunyathelisa unidirectional, le squeegee is bathinteka substrate kanye ipuleti esibukweni. Ngesikhathi esifanayo, le squeegee ebuyiselwa inki ukuqedela umjikelezo zokunyathelisa. Ibanga phakathi kwamanzi engenhla substrate kanye ebusweni ngemuva ipuleti esibukweni ngemuva inki ukubuya ubizwa ngokuthi okufanayo ipuleti ibanga noma ibanga net, futhi ngokuvamile kufanele kube 2-5 mm. Lapho isandla ephrintwa, amasu ka-opharetha futhi ubungoti nomthelela ekwakhekeni kweNhlangano awunqunte ngqo. Ekusebenteni, isikrini amaphrinta ezinqwabelene eziningi okuhlangenwe nakho okulusizo, okungase ngamafuphi amaphuzu ayisithupha, okungukuthi, ukuqinisekisa linearity, isivinini iyunifomu, engela alinganayo, ingcindezi zokulinganiswa, ukungathathi hlangothi, futhi verticality we squeegee. Ngamanye amazwi, lo squeegee okufanele kuqonde phambili ngesikhathi ukunyathelisa ongenakunyakaziswa sokunene nesobunxele; ngeke kube okusheshayo engaphambi nangemva kwako kuyashesha, futhi kungaba ukuthi ingasheshi noma okusheshayo engaphambi nangemva kwako kuyashesha; engela ukuthambekela ukuba plate inki kufanele igcinwe njalo, futhi ukunakekela okukhethekile kufanele kukhokhelwe sokunqoba engela enyakazayo. Kancane kancane ukwandisa inkinga evamile; ukuphrinta ingcindezi kufanele igcinwe iyunifomu; ukugcina ibanga phakathi squeegee futhi ohlangothini engaphakathi Uhlaka anezikhala alinganayo; bese ugcine ipuleti likayinki ukubiyela mpo.
2. Flat esibukweni ebusweni umshini wokunyathelisa imisebenzi. Flat isikrini ukuphrinta surface isikrini libhekisela screen ukuphrinta nge flat screen kwi cylindrical noma ngaphezulu oyindilinga. Ngaphansi kwezimo ezithile, futhi kungenzeka ukwenza wokunyathelisa kwesikrini ezindaweni engonxantathu ezifana evele okweqanda, ama-drum evele, futhi arc evele.
Dry-net lwalugobile umshini wokunyathelisa ebusweni isikrini emshinini antjintje isikrini ipuleti flat ukuphrinta phezu lwalugobile.
Umgomo we flat screen iphrinta ngenhloso ngaphandle lwalugobile a-roller eziveza b-eksisi uyokusekela eziveza c-KaMose. Phakathi ukuphrinta, kwefulethi wokunyathelisa kwesikrini plate kanye hambisa substrate kuyilapho squeegee kuyinto umile. I flat wokunyathelisa kwesikrini ipuleti is uqale ukucindezela ku ifreyimu kwesikrini futhi flat screen lwalugobile umshini wokunyathelisa kwesikrini uhamba ngesivinini iyunifomu. Indaba ukuphrinta ibekwe kudivayisi asekelayo uzungeza ngenxa ukungqubuzana we ipuleti esibukweni. Ijubane ulayini substrate lwalugobile ngesikhathi umugqa awunqunte kuyafana ijubane kwesikrini ipuleti flat ekubonile ukuphrinta squeegee.
Kwakucatshangwa ukuthi umugqa embossing kumele busbar esiphezulu substrate ebusweni wokunyathelisa lula okwandisa engela off-web nokuqinisekisa ikhwalithi zokunyathelisa. Ukuze kube lula shintsho, squeegee ngokuvamile usebenzisa engela sokudlondlobala 60 ° ± 15 °, futhi iyadingeka ukuze ukwazi ulungise degree mpo kanye phansi-na-phansi ubukhulu. Ukulungiswa ukuze mpo wukuqinisekisa ukuthi ulayini onqenqemeni asisho ukukhiqiza shift lateral lapho ukulungisa phezulu naphansi, futhi ngaso sonke isikhathi wenza ephezulu ibhasi A; the squeegee nge engela mpo 60 ° ± 15 ° isetshenziswa ukuqinisekisa ukuthi kwakhiwa i-engeli squeegee is ngemuva kokufakwa mpo. α. Ngo ukulungiswa uqobo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi indiza esikrinini ukuphrinta plate kanye impahla ebusweni kunyatheliswe bathinteka ngesikhathi, emgqeni imprinting kungenzeka kancane phambili. Ikakhulukazi, lapho ubukhulu substrate kuyinto elikhulu nje, emgqeni imprinting kumele itholakale phambili. Idivayisi ukwesekwa yokunyathelisa lwalugobile kuyinto Zonke izinhlobo amadivaysi ekhethekile aklanywa futhi akhiwe ngumsebenzisi ngokuvumelana izidingo zomkhiqizo.
iziqukathi Cylindrical noma iziqukathi oyindilinga kungaba inyatheliswe ne amabili namabhuzu roller amabombo phezu lwalugobile, emikhonweni-uhlobo inkomishi-uhlobo bushing amabombo nge obuphelele ukuze ubukhulu isilinganiso esingaphansi 1.5, futhi iziqukathi eziyize nezimo kungenziwa kusekelwa amadivayisi inflatable. I lesiyingi cishe ingxenye surface cylindrical ukuthi kungenziwa kusekelwa wamatshana cylindrical.
Isimiso zokunyathelisa phezu isigaxa ngokuyisisekelo iyafana isimiso zokunyathelisa phezu uMbhalo. Umehluko ukuma ingcaca kwesikrini ukuphrinta ipuleti kanye nefomu ukuhamba ipuleti wokunyathelisa kwesikrini. Lapho senza ipuleti wokunyathelisa kwesikrini esetshenziswa yokunyathelisa kobuso Isigaxa, kubalulekile kuqala ukudweba umbono zenzeka of ebusweni Isigaxa, futhi uthole maphakathi wemboni esekelwe umbono zenzeka, bese ukhetha luhlaka lolufanele ukwenza ipuleti esibukweni.
On inguqulo ye efgh ukuthi singamelana nalobo ngokuphelele noAbhede emise okwe-fan, ipuleti ukuphrinta azivumelanise ukuma fan ikhiqizwa. Lungisa ibha kwesokudla angela version efgh bese ufake o-eksisi njengoba inguqulo emise okwe-fan. Khona-ke, njengoba ne ukunyatheliswa kobuso isilinda, ezinamasondo amane zisetshenziselwa ukusekela substrate ngaphansi ipuleti, ikhaba iduduzekile, nesitsha idluliswa simise fan, futhi ebusweni ipuleti Isigaxa kungaba inyatheliswe ngokucindezela blade. Phakathi ukuphrinta, ukunyatheliswa oyindilinga lazo lingeniswa umugqa ukuxhumana ipuleti wokunyathelisa kwesikrini ngaphansi kwengcindezi ethile squeegee; lapho ipuleti wokunyathelisa kwesikrini ihamba nendawo emhlabeni ahlangene emise okwe-fan ukuthuthukiswa umdvwebo, indaba ukuphrinta ijikeleziswa synchronously kudivayisi asekelayo. Ezemidlalo; inki ngaphansi ukucindezela squeegee, uphuthelwe ebusweni substrate ukuqedela umsebenzi wokunyathelisa.